5 kulan oo aadan ku seegi karin moobilkaaga Android | Androidsis
Haaruun Rivas | 26/06/2021 14:00 | La cusbooneysiiyay 29/06/2021 00:55 | Aaladaha Android, Ciyaaraha Android
Waxaa jira qoraallo badan oo uruurin ah oo aan horey ugu sameynay Androidsis. Iyaga dhexdooda waxaan kula macaamiloonaa barnaamijyada noocyadooda kala duwan iyo, dabcan, cayaaraha noocyo kala duwan, waana mid ka mid ah qaybaha ugu ballaaran ee la akhriyo, maadaama aan diiradda saareyno qorista kuwa ugu fiican nooc kasta.
Fursadan waxaan kuugu soo bandhigeynaa taxane ah oo ciyaaro ah oo ay tahay inaad haa ama haa ku haysato moobilkaaga Android. Waxaad ka heli doontaa ciyaaro lama huraan ah oo aan ku xirnayn nooc gaar ah ama nooc, sidaa darteed waxaad ka heli kartaa qaar tartamaya, kuwo kalena dagaal, ficil iyo isboorti, iyo kuwo kale.
Halkan waxaa ah taxane ka mid ah 5-ta kulan ee ugu wanaagsan ee taleefannada gacanta ee aan ka maqnaan karin; intaas ka badan, ficil ahaan waa lagama maarmaan. Waxaa xusid mudan, sida had iyo jeer aan yeelno, taas dhammaan kuwa aad ka heli doontid qoraalkan uruurinta waa bilaash. Sidaa darteed, uma baahnid inaad fargeeto wax lacag ah si aad u hesho mid ama dhammaantood. Si kastaba ha noqotee, mid ama in ka badan ayaa laga yaabaa inay leeyihiin nidaam lacag-bixin gudaha ah, oo u oggolaanaya helitaanka waxyaabo badan oo dhexdooda ah, iyo sidoo kale astaamo qiimo sare leh iyo kuwo horumarsan. Sidoo kale, looma baahna in wax lacag ah la bixiyo, waxaa mudan in lagu celiyo. Hadda haa, aan u nimaadno.
2 Weerarkii Galaxy: Alien Shooter
3 PAKO weligiis
4 Dagaalyahan Ninja: halyeeyga ciyaaraha xiisaha leh
Waxaan ku bilownay isku-dubbaridkan qaab Lep's World, ciyaar taas oo, mawduuceeda darteed iyo inay tahay meel aad u wanaagsan oo lagu guuleystay, waxay na xusuusinaysaa wax badan oo ka mid ah Mario Bros oo ka socda Nintendo. Dhab ahaan, cinwaankan waxaa dhiirrigeliyay Mario, sidaa darteed layaab ma leh inay taabato noloshayda in kabadan hal.
Taasina waa Lep's World waa ciyaar dabeecad leh oo waliba aad u jecel. Waxaan wajahaynaa goblin muuqaal qurux badan oo ujeedkeedu yahay uruurinta dhamaan shilimaadka, ka leexashada carqaladaha iyo cadawga, iyo sidoo kale baabi'inta, iyo waliba ka guuleysiga aduunyada iyo heerarka cajiibka ah ee aad u kala duwan, maadaama ay jiraan kuwa badan oo halkaas jooga, taas oo ah sababta taas oo aan sahlaneyn in lagu caajiso ciyaartan madal.
Si sax ah sababtaan awgeed ayaan u dhigeynaa liiskan, sidoo kale maxaa yeelay waa cinwaan la ciyaari karo waqti kasta iyo goob kasta, maadaama ay ku saabsan tahay ciyaar aan u baahnayn qadka internetka. Taasi waa sababta, sinnaba, ugama maqnaan karto taleefankaaga gacanta ee Android.
Su'aasha, Dunida Lep waxay leedahay in kabadan 160 heerar, midba kan kale wuu ka adagyahay. Bilowgii wax walbo waa caadi oo waa sahlan yihiin in laga gudbo, laakiin wax walbo si tartiib tartiib ah ayey u noqdaan kuwo adkaada markaad ku sii socotid adduunka Lep. Isla mar ahaantaana, waxaad leedahay jilayaal sida Blurgg, Long John, Super Sam iyo Colleen, kuwaas oo qayb ka ah 8 guud ahaan. Mid waliba door buu ku leeyahay ciyaarta burcad badeed, robot iyo inbadan.
Weerarkii Galaxy: Alien Shooter
Marnaba kuma xumaanayso in lagu buuxiyo diiqadda ciyaarta dayax gacmeedka oo ay tahay inaad baabi'iso oo aad ka adkaato maraakiibta shisheeyaha ah ee cadowga ku ah bannaanka. Taasi waa sababta aan kuugu keeneyno Galaxy Attack: Alien Shooter, oo ah cinwaan ay tahay inaad ku badbaadiso caalamka iyo, isla mar ahaantaana, Dhulka, oo wata maraakiib tiknoolajiyad sare iyo hub leh.
Waxaa jira boqolaal iyo boqollaal maraakiib shisheeye ah oo doonaya inay ku duulaan Dunida qiimo kasta ha ku qaadatee. Waajibaadkaaga ayaa ah inaad iyada ka ilaaliso iyada oo ah taliyaha laguugu talagalay inaad noqoto. Waxaad awoodi doontaa inaad isticmaasho moodooyin badan oo maraakiibta waaweyn ah, oo mid kastaaba ka horumarsan yahay kii ugu dambeeyay. Intaa waxaa dheer, waxaa jira heerar badan; ka adkaan shisheeyaha iyo waji madax.
Su'aasha, Waxaa jira ilaa 120 heer oo ay tahay in laga gudbo si loo badbaadiyo meeraha guud ahaan. Si aad si guul leh ugu dhammaystirto, waa inaad u dhaqaaqdaa shaashadda adiga oo maraya qasabadaha booskaaga. Waxaad awoodi doontaa inaad adeegsatid arsenal cajiib ah iyo iskudhafyo yaab leh oo isugu jira weerarro iyo rasaas xoog badan leh, maadaama aad u baahan tahay dhammaan caawimaadda si aad ula kulanto wax ka beddelka arsenal cadowga, taas oo iyaduna aad u cabsi badan.
Galaxy Attack: Shisheeyaha Shisheeyaha waxaa loo tiriyaa ciyaar kale oo taas ah kama maqnaan karo moobilkaaga Android, ahaanshaha mid ka mid ah kuwa ugu madaddaalada badan uguna fudud ee ka jira dhammaan dukaamada Play Store. Waa ciyaar xoogaa retro-style ah oo inta badan lagu ciyaaro qaybteeda. Kaliya Dukaanka Play wuxuu leeyahay wax ka badan 100 milyan oo soo dejin caalami ah. Waxay sidoo kale ku faantaa qiimeyn adag oo ah 4.5-xiddig dukaan ku dhow iyo ku dhowaad 2 milyan qiimeyn iyo qiimeyn togan.
Moobilkaaga gacanta ah ee Android ma dhaafi kartid ciyaar fudud, PAKO weligiisna waa mid aad hubaal u jeclaan doontid, fudeydkiisa iyo firfircoonaanteeda soo jiidashada leh oo ay tahay inaad kaga baxsato booliska iyo qof kasta oo ku eryanaya adduun dhigashadiisu tahay mid waxaad ka heli kartaa mid aan la koobi karin oo leh heerar iyo xaalado badan oo ka dhigaya kulankaan mid ka mid ah kuwa ugu madaddaalada badan ee soo uruurinta kulamada muhiimka u ah Android.
Way fududahay inaad jahwareerto marka hore, waxay umuuqataa inay tahay ciyaar kale oo dhigashada gaariga, laakiin fikraddu had iyo jeer waa in lagu baxsado. Bilowgii wax walba way fududahay, caqabado fudud oo la iska ilaaliyo, laakiin, sidaad u maamusho inaad ka baxsato dhammaan booliska oo aan lagu qaban, arrimuhu way sii adkaanayaan.
In PAKO weligiis waxaad isticmaali kartaa noocyo badan oo gawaari ah, oo aad furi karto markaad ciyaareyso oo aad ku dhex marayso. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira qaab qiimeyn tartan ah iyo guulo la fuliyo, sidaa darteed had iyo jeer waxaa jira wax lagu sameeyo cinwaankan miisaanka fudud.
Dhinaca kale, adduunyadu ma yara; waxaa jira xaalado baarkin dhigasho oo kaligood dhib ka dhigaya waqti kasta. Intaa waxaa dheer, waxaa jira waxyaabo fara badan oo dhif ah oo aad ka heli karto baacsiga oo kaa caawin doona baadi-goobkaaga si aad uga baxsato saraakiisha sharci fulinta. Noqo khabiir ku takhasusay baxsiga PAKO weligiisna muuji sida wanaagsan ee aad uga dambeyso giraangirta.
Developer: Ciyaaraha Ragga
Dagaalyahan Ninja: halyeeyga ciyaaraha xiisaha leh
Lowska 'ninjas' ma aha mid aad u badan, waana taas sababta saxda ah ee ay sidoo kale ugu jirto isku-dubaridka ninja dagaalyahan: halyeeyga ciyaaraha xiisaha leh, mid ka mid ah cinwaannada ugu caansan qaybtiisa. Tani waa ciyaar madal, ficil iyo dagaal taas oo aad ku qasban tahay inaad ku xakameyso dagaalyahankaaga ninja oo aad ka adkaato dhammaan cadawga ku hoos qarsoon hooska. Isla mar ahaantaana, waa inaad ka fogaataa dhammaan dabinnada, caqabadaha iyo dhibaatooyinka lagugu soo bandhigo dhammaan adduunyada iyo heerarka ciyaartan.
Dabcan, ninja-gaagu wuxuu leeyahay xirfado, farsamooyin iyo awoodo ka caawin doona himiladiisa. Ka faa'iideyso isku-darka, weerarrada iyo arsenal hana u oggolaan inay wax kaa joojiyaan illaa aad ka gaarto dhammaadka wax walba oo aad garaacdo tan ugu weyn.
Mawduucu wuxuu dhacayaa habeenkii, marka wax waliba ka madow yihiin weligood. Noqo mid qarsoodi ah oo dulqaad badan markay tahay inaad ahaato mid dagaal badan oo go'aan qaadata markay xaaladdu ku qasbayso. Mararka qaar way fiican tahay inaad hakad gasho oo aad si fiican u eegto dhulka aad ku sugan tahay. Waxa ugu fiican ayaa ah inaad dhowr nolol leedahay si aadan had iyo jeer uga soo laaban meel aad xoqdo, laakiin si fiican ugu isticmaal; ma rabto inaad kubixiso waxa aad haysato oo dhan.
Cinwaankani kama faa'iideysto dhowr qaab oo ciyaarta ah iyo sheeko xiiso leh oo kaa dhigeysa inaad rabto inaad waxbadan ogaato, laakiin, si aad sidaas u yeelatid, waa inaad ku sii socotaa adduunka. Sawir gacmeedyada si aad u wanaagsan ayaa loo qabtay sidoo kale, iyo sidoo kale heesta codka. Maxaa intaa ka badan, waa ciyaar kale oo sidoo kale la ciyaari karo iyada oo aan laga helin qadka internetka, sidaa darteed waxaad ku ciyaari kartaa ninja wakhti kasta, meel kasta.
Developer: Ciyaaraha TOH
Mawduuca ciyaartan waa mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan uguna qoto dheer, shaki la’aan. Halkan waa inaad ka heshaa Richard, oo ciyaarta ku jira adeerkaa. Waana in dabeecaddan si lama filaan ah loogu waayey duruuf aad u qariib badan oo ka tagtay waxyaabo badan oo laga fikiro. Intaas waxaa sii dheer, waa inaad ilaalisaa amniga dadka aqoonta leh, isla waqtigaas oo ay tahay inaad ku dhex marto adduunyo kala duwan si aad u horumariso oo aad u gaarto ujeeddooyinka.
Ciyaartan waa inaad ku ciyaarto doorka baare. Waxaa jira in ka badan 7.600 oo hawlgallo ah in la qabto, mid kastaaba wuu ka dhib badan yahay kii hore. Isla mar ahaantaana, waxaa jira ku dhowaad 100 meelood oo laga furi karo oo laga baadhayo, astaamo badan oo aad ogaan doontid markaad ku sii socoto ciyaarta, minigames badan ayaa diyaar u ah inay kaa dhigaan inaad ku raaxaysato waqti xiiso leh iyo in ka badan 1.200 ururinta waxyaabo aad u wanaagsan oo qarsoon si aad u hesho.
Ciyaartan ayaa ah mid ka mid ah kuwa ugu caansan nooceeda, iyadoo in ka badan 5 milyan oo laga soo dejisto ay ku jirto Google Play Store ee mobilada loo adeegsado Android. Dhanka kale, Bulshada Qarsoodiga ah - Bulshada Qarsoodiga ah waxay ku dhowdahay 900 kun faallooyin iyo qiimeyn wanaagsan oo ku jirta dukaanka, oo leh qiimeyntii ugu dambeysay ee 4.7 xiddigood oo, shaki la'aan, ka dhigeysa mid ka mid ah kuwa ugu dhameystiran oo lagu ciyaaro dukaanka. Arrinta kale ayaa ah in cinwaankani uusan ahayn iftiinkaas, laakiin in yar oo ka badan 100 MB oo culeyskiisu u qalmo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » 5 kulan oo aan ka maqnaan karin moobilkaaga Android
7 sababood oo loo adeegsado VPN on Android